Transfer Tansee iPhone SMS Alternative: Sidee si ay u gudbiyaan SMS ka iPhone in Computer
About Tansee iPhone Transfer SMS
Tansee iPhone Transfer SMS waa codsi fudud desktop u isticmaala inay gurmad SMS ka iPhone in computer ah. Hoos waxaa ku qoran qaababka ay ugu muhiimsan:
SMS kaabta ka iPhone in computer ah halka xafidaada lifaaqa, sida video iyo sawiro;
SMS View in .ants, .txt, qaabab .mht on PC Windows ah;
Taageerada dhoofinta SMS sida qaabab elekterikal, .ants iyo .mht;
Taageerada iPhone, iPod taabto, iyo iPad;
Orod in Windows 8/7 / XP / 2003/2000/98;
Waxaad kartaa halkan kala soo bixi Tansee iPhone Transfer SMS >>
Tansee waa aalad wanaagsan oo isticmaala inay gurmad SMS ka iPhone ah in computer ah. Oo taageerada dhoofinta SMS qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan .ants, .txt, .mht. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa qaabab kuwaas sidaas ma aha caadi ahaan loo isticmaalo marka laga reebo .txt. Dadka isticmaala qaar ka mid ah, ka dib markii SMS iPhone wareejiyo computer la Tansee iPhone Transfer SMS, ay weli ma arki kartaa in ay SMS. Iyo codsigan kaliya taageeraa SMS, xitaa ma music, sawiro, iyo videos. Haddii aad rabto in aad xal dhamaystiran oo si iPhone, waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso in kale Tansee iPhone SMS Transfer - Wondershare TunesGo , taas oo keliya ma aha waxa ay taageertaa SMS, laakiin xiriirada, music, playlists, videos, sawiro, Lugood U, Podcasts, iyo in ka badan.
Tansee iPhone Transfer Alternative - TunesGo Wondershare
Wondershare TunesGo - Transfer SMS ka iPhone in Computer Si fudud
Save fariimaha qoraalka ah, MMS & iMessages ka iPhone la lifaaqyada sida HTML / XML file a / TXT;
SMS Dhoofinta ka iPhone in .txt, .html, iyo qaabab .xml u fudud u arkaysid iyo daabacaadda;
Copy music iyo playlists ka iPhone in Lugood Library kombiyuutarka ah;
Kaabta songs, playlists, videos, sawiro, iyo xiriirada ka iPhone in computer;
Taageerada iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), 5c iPhone, iPhone 5s, iPhone 4, iPhone 4s, iwm ee macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, 8 macruufka iyo macruufka 9;
Ka iPhone Bedelka SMS in Computer la Tansee iPhone SMS Transfer Alternative
Tallaabada 1. Download Wondershare TunesGo oo ku xidh aad Windows PC. Waxaa si buuxda la jaan qaada Windows 8/7 / Vista / XP. Ka dib markii aad u soo dajiyo, waxaa isla markiiba abuurtaan.
Tallaabada 2. Isticmaal USB ah cable iPhone in ay ku xidhmaan aad iPhone la PC. Markaas waxaad ku arki kartaa iPhone muuqan in daaqadaha weyn ee Wondershare TunesGo.
Tallaabada 3. Sax santuuqa jeegga ka hor SMS ah in aad ku socoto si ay u gudbiyaan si aad u computer. Dhammaan SMS aad iPhone waxaa halkan soo bandhigay.
Tallaabada 4. Riix ikhtiyaarka "Dhoofinta in". Ka dibna dooro qaab ah in aad ku socoto si loo badbaadiyo SMS sida. Raadi gal ah in aad kombuutarka oo u badbaadin doonaa.
Options More in kaabta iPhone SMS
Ka sokow Tansee iPhone SMS Transfer iyo Wondershare TunesGo, waxa kale oo aad isticmaali kartaa Lugood ugu on your computer ama iCloud in gurmad aad iPhone SMS. Marka aad isticmaasho Lugood in iCloud in gurmad aad iPhone, SMS waxaa ka mid ahaa in file gurmad ah. Si kastaba ha ahaatee, aad uma soo saaro karo SMS ka file gurmad ah, taas oo macnaheedu yahay in aad marnaba u arkaan doonaa fariimaha kuwaas. Kaliya ka dib markii aad u soo celin aad iPhone la file gurmad ah, waxaad yeelan doontaa in ay iyaga ka aragtid aad iPhone.
Bacup iPhone SMS la Lugood :
1. Connect aad iPhone la your computer iyo abuurtaan Lugood.
2. Guji "View" menu dooro "Show galeeysid". Ka dibna waxaad arki kartaa iPhone aagga AALADAHA.
3. Riix si aad iPhone. Ka dibna riix "Summary" tab. Laga soo bilaabo uu furmo suuqa, waxaad ka arki kartaa ikhtiyaarka "Back Up". Waxaa Click.
SMS iPhone kaabta la iCloud:
1. Connect aad iPhone la Wi-Fi.
2. On aad iPhone, guji "Settings"> "iCloud". Guji "Kaydinta & kaabta". Marka farrinta ah "Your iPhone gurmad mar dambe si aad u computer si toos ah marka aad u hagaagsan oo Lugood doonaa", guji "OK" iyo "kaabta Hadda" awood in ay "on".
> Resource > Transfer > Tansee iPhone SMS Transfer Alternative si ay u gudbiyaan SMS ka iPhone in Computer